စက်တင်ဘာလ 2017 |5၏စာမျက်နှာ 76 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 5)
ASG Abby Denson နှင့်အတူနယူးယောက်မြို့အရောင်းရေးအဖွဲ့ခိုင်မာစေ
EMERYVILLE, ကာလီဖိုးနီးယား။ - အဆင့်မြင့်စနစ်များအဖွဲ့ (ASG), တစ်ဦးဦးဆောင်မီဒီယာနည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီယနေ့ Abby Denson ကုမ္ပဏီ, ထိရောက်သောစက်တင်ဘာ 1 ပူးပေါင်းထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ သူမသည်အရှေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ASG ရဲ့နယူးယောက်အခြေစိုက်ရောင်းအားအသင်းများအတွက်အတွင်း၌ရောင်းအားထောက်ခံမှုနှင့်အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပေးပါလိမ့်မယ်။ Denson အတွင်း၌ရောင်းအားအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအခန်းကဏ္ဍအတွက် Tekserve / T15 ကွန်ပျူတာနှင့်အတူ2နှစ်ပေါင်းနေခဲ့ရသည်။ ...
ဗီဒီယိုကို Post-ထုတ်လုပ်မှု International
ရာထူး: ဗီဒီယို Post ကို-ထုတ်လုပ်မှု International ကုမ္ပဏီ: မင်နီဆိုတာပြေးခုံပစ်တက္ကသိုလ် - Gopher ဒစ်ဂျစ်တယ် Productions တည်နေရာ: မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ် Minneapolis-စိန့်ပေါလ် MN အမေရိကန် Gopher ပြေးခုံပစ်နဲ့ Gopher ဒစ်ဂျစ်တယ် Productions အဓိကအားပြီးဆုံးပြီးနောက်အကဲဖြတ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အချိန်ပြည့်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ရှာကြသည် ထုတ်လုပ်မှု, သေနတ်ပစ်နဲ့တည်းဖြတ်ရေးကို web အင်္ဂါရပ်ပုံပြင်များနှင့် In-ဂိမ်းဖျော်ဖြေရေးအပိုင်းပိုင်း။ ဒီအနေအထားနှင့်အတူအတွေ့အကြုံများကိုသင်ယူ on "လက်တို့ကို" လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်: Assist ...
ရာထူး: သဘောတူညီမှုရညှိနှိုင်းရေးမှူးလက်ထောက်။ အလုပ်လုပ်အဝေးမှ။ ကုမ္ပဏီ: မီယာ LLC တည်နေရာများသောအားဖြင့်စတိုင် LLC အတွက်ပူနွေးနေပါနဲ့: အားလုံးဖက်ရှင်များအတွက် Calling Salt Lake City, UT အမေရိကန်သဘောတူညီမှုရဖက်ရှင်ညှိနှိုင်းရေးမှူးလက်ထောက်! သငျသညျအိမျကနေအလုပ်လုပ်များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်နှင့်အနည်းငယ်အပိုမုန့်စိမ်းပါစေအဖြစ်အစားအသောက်များတွင် Coke စွဲလမ်းလျက်ရှိချင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့တွေ့ဆုံရန်ချစ်ကြလိမ့်မည်! ...
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ IABM ဒီဇိုင်း & ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုလက်ခံတွေ့ဆုံ 2017
WESTFORD, Mass - ။ စက်တင်ဘာ 27, 2017 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ဆန်းသစ် Real-time မာလ်တီမီဒီယာပေးပို့ဖြေရှင်းချက်၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူ, ကုမ္ပဏီများအတွက်အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍအတွက် IABM ဒီဇိုင်း & ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုလက်ခံရရှိကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် ကုမ္ပဏီ၏ SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်း (TM) ။ အဆိုပါ SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်းတစ်ခုနှင့်အတူတစ်လေးရုပ်သံလိုင်း Auto-အသိ SD က-SDI / HD ကို-SDI / 3G-over-IP ကိုဘက်စုံသုံးတံခါးပေါက်သည် ...
ဂျာမန် Post ကို-အိမ်, Schnittwerk, Facilis Shared သိုလှောင်တိုးချဲ့; Facilis Hub ဆာဗာပေါင်းစပ်ဖို့ဥရောပရဲ့ပထမဦးစွာ Facility
Hudson, MA (စက်တင်ဘာလ 16, 2017) - IBC 2017, Facilis (Booth 7.B40), ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကွန်ရက်များအဘို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းမှာအဓိကက Shared သိုလှောင်မှုစနစ်အဆင့်မြှင့်ကြေညာလိုက်ပါတယ် ရှေ့ဆောင်ဂျာမန် post ကိုအိမ်မှာ, Schnittwerk ။ အဖြစ်ကောင်းစွာယင်း၏ Facilis သိုလှောင်မှုကွန်ယက်ကိုချဲ့ထွင်အဖြစ်, Schnittwerk တပ်ဆင်ရန်ဥရောပတိုက်တွင်ပထမဦးဆုံးအဆောက်အဖြစ်လာသည် ...
ချီလီအမျိုးသား DTV ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းကိုပံ့ပိုးဖို့ GatesAir
ပုဂ္ဂလိကတီဗီထုတ်လွှင့်, Mega, လျှော့ချ utility ကိုကုန်ကျစရိတ်နှင့်သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည် Cincinnati မှတဆင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအနိမ့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ပို့, ကျယ်ပြန့် Multichannel ကွန်ယက်ကိုစီမံကိနျးအတှကျ GatesAir ကိုရွေးကောက်ပြီးစက်တင်ဘာလ 27, 2017 - GatesAir, ကြိုးမဲ့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ရေဒီယိုအဘို့အ Over-the-air အကြောင်းအရာပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်, ချီလီထုတ်လွှင့်, Mega က၎င်း၏အမျိုးသားရေးဒီဂျစ်တယ်တီဗီအကူးအပြောင်းကိုထောကျပံ့ဖို့ GatesAir ကိုရွေးချယ်ထားပြီးကြောင်းကြေငြာလိုက်သည် ...
အမြင့် Volume ကိုသင်္ကေတပြထုတ်လုပ်မှု-Aiea, HI
ရာထူး: အမြင့် Volume ကိုသင်္ကေတပြထုတ်လုပ်မှု-Aiea, HI ကုမ္ပဏီ: Anheuser-Busch တည်နေရာ: 'Aiea HI အမေရိကန် Anheuser-Busch ဂရစ်ဖစ်ကိုယ်စားပြု / Technician အ Sign ။ 1: ကိုယ်စားလှယ်လောင်း / အောက်ပါအတွေ့အကြုံအပိုင်ကိုသိသင့်ပါတယ်။ CorelDraw (PC ကို)2။ Microsoft က Office ကို3။ ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ RIP Software များ (သို့မဟုတ်အခြား RIP)4။ Sign-အောင်အတွေ့အကြုံ5။ HP က Wide Format ကိုပုံနှိပ်ဒီဇိုင်း, layout ကို, ပုံနှိပ်နဲ့ PC ဟာ့ဒ်ဝဲ (image ကိုစကင်နာ, အရောင် plotter / ပရင်တာ, အသုံးချဖို့လက္ခဏာနှင့်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေစုဝေး ...